Fedora Installation လမ်းညွှန် 28 အဆင့်ဆင့်။ Linux မှ
Fedora 28 အဆင့်ဆင့် installation လမ်းညွှန်
Fedora 28 ဗားရှင်းကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်၊ ဘလော့ဂ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ချက်ပေးသော၎င်း၏အသုံးပြုသူများသည် Fedora 27 မှဗားရှင်းအသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။
သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုဘဲထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်, အမြဲတမ်းခြစ်ရာကနေ install လုပ်ဖို့အကြံပြုထားတယ် အသုံးပြုသူအသစ်များအတွက်ပါထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားမျှဝေပေးသည်.
1 Installation medium ၏ရိက္ခာကို download လုပ်၍ ပြင်ဆင်ပါ
1.1 စီဒီ / ဒီဗီဒီထည့်သွင်းမီဒီယာ
1.2 USB တပ်ဆင်မှုကြားခံ
2 Fedora 28 ကိုဘယ်လို install ရမလဲ။
Installation medium ၏ရိက္ခာကို download လုပ်၍ ပြင်ဆင်ပါ
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက system image ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ DVD သို့မဟုတ် USB drive ပေါ်တွင်ကူးယူနိုင်သည်၊ ၎င်းကို၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်မည်။ ဒီမှာလင့်ခ်.
ဤအရာပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် installation medium ကိုတီထွင်သည်။
စီဒီ / ဒီဗီဒီထည့်သွင်းမီဒီယာ
Windows ကိုဖြေ - ကျနော်တို့ ISO7ကို Imgburn, UltraISO, Nero ဒါမှမဟုတ်တခြားပရိုဂရမ်တွေနဲ့ Windows XNUMX မှာမရှိရင်တောင်မီးရှို့နိုင်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ISO ကိုညာဖက်နှိပ်ပြီးရွေးနိုင်တယ်။
Linux ကိုဖြေအထူးသဖြင့် graphical environment တွေပါတဲ့ Brasero, k3b နဲ့ Xfburn ကိုသုံးနိုင်တယ်။
Windows ကိုဖြေ - Universal USB Installer (သို့) LinuxLive USB Creator ကိုသုံးနိုင်တယ်။ နှစ်ခုစလုံးသုံးရလွယ်တယ်။
Fedora အဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးသည့်ကိရိယာတစ်ခုရှိသော်လည်း၎င်းကိုခေါ်သည် Fedora မီဒီယာစာရေးဆရာ Red Hat စာမျက်နှာမှ၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းပြသည်။
Linux ကို: အကြံပြုထားသောရွေးချယ်စရာမှာ dd command ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် Fedora ပုံရိပ်ရှိသည်နှင့်မည်သည့်လမ်းကြောင်းတွင် usb ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်သည့်လမ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သင်၏ pendrive သို့သွားသောလမ်းကြောင်းသည်များသောအားဖြင့် / dev / sdb ဖြစ်သည်။ သင် command ဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
ပြီးသားဖော်ထုတ်ပြီးပြီသင်ရုံအောက်ပါ command ကို execute ရန်ရှိသည်
Fedora 28 ကိုဘယ်လို install ရမလဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဆင်မှုအလယ်အလတ်နှင့်အတူပြီးသား, ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်၎င်းကိုဆက်လုပ်သည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် system image ကိုမှန်ကန်စွာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ပါကအောက်ပါမျက်နှာပြင်ကိုပြလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံး option ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ် Installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုထမ်းရန်စောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မည်။
ဒီပြီးပြီကျနော်တို့နည်းနည်းစောင့်ဆိုင်းနှင့် နောက်မျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မည် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Live Mode ကိုထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ system ကိုစမ်းသပ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်ထို option ကိုပေးသည်။
ကျနော်တို့ install ကိုကလစ်နှိပ်ပါ နှင့်ချက်ချင်း Wood က Fedora installation wizard ကိုဖွင့်လိမ့်မည်။
ဒီမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားနှင့်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ရန်၎င်းကတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ဒီအမှုကိုပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ဆက်လက်။
အကယ်၍ သင်သည်ယခင် version များ၌ Fedora ကိုထည့်သွင်းပြီးပါက၊ installer တွင်ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်သာရှိကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
မသာလျှင် ကျနော်တို့ "တပ်ဆင်ခ destination သည်" option ကိုရွေးချယ်သွားကြသည်။
ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ကို Fedora ကို install လုပ်မယ့်နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည်။
Fedora ကိုထည့်သွင်းရန် disk တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခန်းကန့်များကိုကိုယ်တိုင်စီမံသည်၊ hard disk ကိုအရွယ်အစားပြောင်းသည်၊ သတင်းအချက်အလက်ကိုသင်မဆုံးရှုံးလိုပါကအကြံပြုထားသည့်ရွေးစရာ။
အဲဒီမှာပြီးနောက် Fedora ကို install လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် hard disk တစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်ဖို့ partition တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါမယ်။ အခန်းကန့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်လျှင်၎င်းကိုသင့်လျော်သောပုံစံပေးရပါမည်။
ပြီးသားဒီကိုသတ်မှတ်, ကျနော်တို့ပြီးပြီအပေါ်ကိုနှိပ်ပါသွားပြီးကျနော်တို့အဓိကမျက်နှာပြင်ပြန်သွားပါလိမ့်မယ် installation wizard ကိုဒီမှာ install ခလုတ်ကို enable လုပ်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်စတင်မည်။
အဆုံးမှာသာ ကျနော်တို့ installation မီဒီယာကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပြန်လည်စတင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
system ကို startup မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်အသုံးပြုသူကိုစကားဝှက်တစ်ခုဖြင့် configure လုပ်နိုင်သော configuration wizard ကိုလုပ်လိမ့်မည်။
အချို့သော privacy settings များကိုဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းနှင့်အီးမေးလ်အကောင့်အချို့ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းအပြင်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Fedora 28 အဆင့်ဆင့် installation လမ်းညွှန်
Miguel Cisneros ဟုသူကပြောသည်
မည်သည့်ကြီးကြပ်မှုမှမရှိဘဲ open source ဖြေရှင်းချက်များကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်ရန်အတုထောက်လှမ်းရေးသည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှတော်လှန်ရေးနှင့်လူသားထုအပေါ်ကွန်ပျူတာများ၏လွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
Miguel Cisneros အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာပြaနာတစ်ခုရှိတယ်၊ ငါက linux iso 28 ကိုစာမျက်နှာကနေ download လုပ်လိုက်တာဖြစ်သွားတယ်။ Fedora ရေးတဲ့အချိန်မှာငါရေးတဲ့ 26 iso image ကိုရွေးပြီးငါရွေးလိုက်တဲ့ iso 28 ပုံရိပ်ကိုငါရွေးလိုက်တာနဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကပုံမှန်ပါပဲ။ သို့သော်၎င်းကိုထည့်သွင်းသောအခါကျွန်ုပ် iso ပျက်သွားကြောင်းရပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
MD5 ကို torrenting နှင့်စစ်ဆေး။ ISO ပျက်စီးခြင်းမဟုတ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
Ubuntu 18.04 တွင် touchpad လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေပြီး title bar ခလုတ်များကိုရွှေ့ပါ